Landelela Amabhishi Aseduze Kwami namabhishi angama-25 ahamba phambili eLos Angeles
By UChrisking September 23, 2021 Indlela yokuphila, Izikhangibavakashi 0 Amazwana
- Amabhishi Eduze Kwami -
Isimo sasolwandle (ikakhulukazi uma usuthole ithrafikhi eyanele) singesinye sezici ezikhanga kakhulu endaweni yaseLos Angeles.
Sibeka uhlu lwezindawo ezinhle kakhulu zokuphumula ngePacific esifundeni saseLos Angeles, noma ngabe unenja, ufuna ukulengisa i-glide, ufuna ukubamba i-snorkel noma i-kayak, awukwazi ukuthola amagagasi anele ekubambeni i-surfboard yakho , njenge-birding noma umane ufuna ukubhukuda nokusnuza.
Ngaphandle kweHollywood nethrafikhi, iLos Angeles mhlawumbe yaziwa kakhulu emcabangweni odumile ngamabhishi ayo.
Isifunda saseLos Angeles sinezindawo ezihehayo nezihlonishwayo zasogwini, kusukela kumachibi asolwandle ePhalos Verdes Peninsula kuya esihlabathini esinesihlabathi saseMalibu.
Ukubuka nemisindo yeVenice Ocean Front Walk neSanta Monica Pier kungenzeka kujwayelene nabantu bendawo nezivakashi. Kepha akuwona kuphela amabhishi eLos Angeles; bamatasa kakhulu.
Unalokho engqondweni, nanka amabhishi ayi-13 endaweni efanele ukubhukuda, ukushisa ilanga, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba izintaba, ukuhlola, nanoma yini enye ofuna ukuyenza olwandle.
Amabhishi amahle kakhulu angama-25 eLos Angeles
Ngezansi kunamabhishi aseduze kwami ​​namabhishi angama-25 ahamba phambili eLos Angeles:
1. Khomba Mugu Beach
Ukuhamba ibanga elide ukuya kuleli bhishi, elingaphandle nje komngcele weVentura County, kepha umvuzo uwusogwini olumangalisayo nolunamadwala kanye nokushona kwelanga okuhle kakhulu eSouthern California.
Ngemuva kokuhambahamba epaki lesifundazwe eliseduze, ungaphola ku-surf.
2. URobert H. Meyer Memorial State Beach
Leli elinye lamabhishi aseduze kwami.
Amabhishi i-El Pescador, iLa Piedra, ne-El Matador aphakathi kwezigaba ezincane zolwandle kuleli bhishi elikhulu lombuso.
Lezi zamuva zinikeza ukwakheka kwamadwala okuthakazelisayo nemigede ongayihlola, futhi womathathu ayizindawo ezinhle kakhulu zokuhlanganisa amachibi nokuhlangana kwamabhishi.
3. IPharadesi Cove Beach
IPharadesi Cove Beach ibhishi elizimele elizimele elakhiwe ngemuva kwamawa aseMalibu. IParadises Cove Beach Cafe, ehlinzeka ngazo zonke izinsiza ezixhaswe ikakhulu lolwandle, kepha uma ufuna ukubhukuda noma ukuntweza phezu kwamanzi, ungavakashela lolwandle mahhala.
Abantu abaningi beza ukuqasha amathala ezimele, omatilasi basolwandle, nezindawo zokuphumula futhi kungenye yezindawo ezinokuthula eMalibu uma ungafaka imali kubo (amapatio azimele angadlula ngaphezulu kwama- $ 800 ngosuku olubiza kakhulu ngempelasonto).
Uma ufuna ibhishi elihle ukuchitha iholide lakho, iya eParadise Bay usuka e-Escondido, futhi ekushoneni kwelanga, uzobe uzuze ingilazi ye-rosé.
4. IVenice Beach
Woza Venice Beach ngesihlabathi esingamamayela nohhafu sesihlabathi esinosilika lapho ungendlala khona ingubo ubheke ePacific.
Futhi, ungahlala ku-Venice Beach Boardwalk ethandekayo, lapho abenzi basemgwaqweni nabathengisi be-busk futhi bathengise izinto zabo, amadoda emisipha aphakamisa isisindo esikhulu, futhi amasiko amancane ahlangane.
Yindawo ephithizelayo yabantu abafuna isenzo esincane osukwini lwabo lolwandle.
5. ICarbon Beach (Ibhili likaBillionaire)
ICarbon Beach akulona ibhishi elizimele, kepha linomqondo owodwa. Uzobona abanye abantu abambalwa uma uhamba ngemuva kwezindlu ze-ultra, ezicebile kepha kungenjalo, lolu hambo olude lolwandle lucishe lube kude njengoba uMalibu ethola.
Amanzi alungele ukubhukuda njengoba ethule futhi engenawo amatshe amatshe, futhi isihlabathi sibushelelezi futhi sithokomele — sikulungele ukulala yonke intambama. ICarbon Beach ilungele ukuhamba okunokuthula noma ukugijima.
Kunezindawo ezimbalwa ku- Malibu ezingagcwele izivakashi, futhi lokhu kungenye yazo, ngakho-ke yisebenzise ngokunenzuzo.
6. Escondido Beach - Malibu
Ingabe kukhona ibhishi elizimele kakhulu kune- “Escondido"? Leli, njengeCarbon Beach, lolwandle oluyimfihlo lwaseMalibu olufihlwe ngemuva kwezindlu ezinhle izivakashi ezishayela lazo lidlule lingaqapheli nokuthi likhona.
Ibhishi lapha lincane kancane kuneCarbon, ngakho-ke kuwumqondo omuhle ukuhlola amagagasi kusengaphambili ngoba igagasi eliphakeme lishiya indawo encane yendlala ingubo.
Futhi, ukuhamba ngakolunye uhlangothi, kumnandi, futhi ukuzihambela usuka e-Escondido Beach usentshonalanga uye ebhishi elibizayo iParadise Cove kudumile kubantu bendawo. Ayikho indawo yokupaka; esikhundleni salokho, ukupaka komphakathi kuyatholakala nge-PCH.
I-Escondido Beach inezindawo ezimbili zokufinyelela zomphakathi: elilodwa ebhulohweni elingaphezu kwe-Escondido Creek kanti elinye liseduze ne-27148 Pacific Coast Highway.
7. I-Abalone Cove Beach
Yize bekusele ihora elilodwa nje, iningi lama-Angelenos alazi ngaleli bhishi elithulile, lokuhlala eRancho Palos Verdes. Leli elinye lamabhishi aseduze kwami.
Ngemizila eminingana yokuhamba izintaba kanye nendawo yokugcina imvelo kahulumeni enamawa avikelekile anikeza umbono obabazekayo wePacific, I-Abalone Cove kuyajabulisa noma ngabe ufuna ukubamba iqhaza emisebenzini ehlukahlukene noma umane uphumule esihlabathini.
Inamanye amachibi amakhulu wamanzi aseCalifornia kanye nemigede emikhulu yokuhlola. Ngenxa yamatshe awayo kanye namawa angazinzile ngenhla, ezinye izindawo zasolwandle namachibi asolwandle zivinjiwe, ngakho-ke hlola imephu ukuze uqiniseke ukuthi usendaweni ephephile.
Ukosa inyama namalangabi, kanye nezilwane ezifuywayo, akuvunyelwe.
8. I-El Pescador Beach - iMalibu
I-El Pescador ingelinye lamagugu amathathu olwandle iMalibu aqukethe uRobert Meyer Memorial State Beach (amanye amabili kungu-El Matador neLa Piedra).
Leli elinye lamabhishi aseduze kwami. Inakho konke: isihlabathi, ama-tidepools, izindlu zangasese, kanye ne-cove eyengeziwe efihlekile izivakashi kuleli bhishi eselivele lizimele kwesinye isikhathi zingakubheka.
Olunye lwamabhishi amathathu eqenjini lunophawu lwalo, nendawo yokupaka (ekhokhelwayo) eningizimu yeLeo Carillo eyaziwa kakhulu. Intshonalanga engaphezulu kwalaba abathathu ngu Ibhishi lase-El Pescador.
Uhambo olufushane lwehla ngomgwaqo ophakeme ukusuka endaweni yokupaka e-32900 Pacific Coast Highway kuyadingeka ukufinyelela olwandle, okuyindawo enesihlabathi enamachibi anamanzi.
9. ILaguna Beach
Yehlisa amafasitela bese uqinisa uNatasha Bedingfield lapho ushiya iThe Hills bese wehlela ngasogwini ulibangise ILaguna Seashore.
Idolobha elincane futhi elihle le-Orange Region igudla ugu lwamamayela ayisikhombisa, nemigede yolwandle, amachibi asolwandle, izimpawu zasolwandle, namachibi ajwayelekile wamanzi, ngaphandle kogu lolwandle oluningi uma kungenzeka ukuthi umane nje udinge isambulela sakho uphumule ntambama.
Njengomsuka we-skimboarding, isenzo esifana nokugibela okubandakanya ukugudla unqamule kwamanzi ukuhlangabezana namagagasi aqhamukayo lapho engena, akubanga khona ndawo enkulu yokugwaza kulo mdlalo omubi-noma ukubheka njengesibukeli nje lapho abantu bendawo babukise ngamakhono abo.
Qiniseka ukuthi ikabili uma ubheka imithetho, njengoba ugu lolwandle ngalunye lunendlela yalo yokuzivocavoca okuvunyelwe. Lokhu kungenye yamaTrack Beaches Near Me.
I-Bow Narrows ingulwandle oludumile oluseduze lapho uzobona khona izimpawu ezixegisa amayadi angu-100 olwandle eSeal Rock, kanye ne-skimboarding, i-scuba jumping, ukuntweza komzimba, ukuhlanganisa amagagasi, nokuzivocavoca umzimba okuhlukile kuvunyelwe.
UThalalia Road uyisinqumo esiphakeme phakathi kwama-surfers, kuyilapho iWood's Bay neDarling's Inlet zinamanzi ajulile alungele ukweqa nokuphenya amachibi wamanzi.
10. IRincon Beach Park
Iningi lazi uLwandle Olumnyama eLa Jolla, eSan Diego, njengolunye lolwandle olungenalutho lwaseCalifornia, okwamanje ENyakatho Rincon (okukhulunywa ngabantu bendawo njengeBates Seashore) kungenye indawo ekhululekile lapho ungalahla khona ulayini wakho we-tan, noma usebenzise amagagasi angakwesokudla okwenza lolu lwandle lolwandle lube yindawo ehamba phambili yokugibela oGwini lweFocal.
Ugu lolwandle olungamamayela amathathu lubekelwe imingcele ngokweqiniso futhi lunolaka ezingxenyeni ezithile, ngakho-ke phumela ngaphesheya komgwaqo oya eRincon Park District Seashore uma kwenzeka uthanda isihlabathi esithe xaxa.
Ukuqhubekela phambili kancane ngasogwini yiCarpinteria Feigns Nature Reserve lapho ungasebenzisa khona imigwaqo kanye neCarpinteria Seal Safe-haveture Ungabheka lapho ungabona khona izimvu zelanga phansi ngaphansi.
Abakwa-Naturists balwa ngokuzikhandla ukuhambisana nengxenye ekhethiwe yokugqoka yolwandle futhi ngo-2017, i-District Parks Office kanye ne-Area Sheriff bavuma ukuyeka ukumaka abenudist ngaphandle kwalapho kunesikhalazo.
Uphawu oluthi “No Bareness” olusele ezingxenyeni eziphakeme kakhulu zolo lwandle olushukumisayo, kepha cishe amamitha ayi-1,200 ngasentshonalanga uzolandela esinye isibonakaliso esixwayisa ngokuthi “Ungena Esifundeni Sezingubo,” okusho ukuthi ukuqala kwesifunda sabo esivunyelwe.
11. I-Terranea Cove Beach - Rancho Palos Verdes
Akuwona wonke umuntu oqondayo ukuthi i-cove encane ethule ngemuva Indawo yaseTerranea iyatholakala futhi emphakathini jikelele.
Ibhishi linesizotha futhi liyatholakala ngokuhamba eceleni kwamawa, kepha ngenxa yokuthi indawo yokuvakasha inikeza izihlalo, umuntu angafika engenalutho futhi aneliseke impela.
Futhi, okuhehayo okukhulu ngumhume wasolwandle, obekuzoba nzima ukufinyelela kuwo nezingane ezincane kepha ukukhuphuka okukhangayo phezu kwamatshe emanzini asezingeni eliphansi ezinganeni ezindadlana.
Ukupaka kuyatholakala emphakathini jikelele endaweni yokukhokha ebhalwe uphawu ngakwesokunxele sokuqala kuTerranea Way. Kungukuhamba okuncane ukuya eTerranea Cove kusuka lapho.
Kulabo bethu okungenzeka ukuthi bakhathele ngandlela thile imfudumalo, ulwandle olusenyakatho olufana nalolo I-Oxnard kuyiphupho. Ngokwengxenye enkulu into efana ne-15 degrees epholile futhi amandla akhululeke ngokungangabazeki.
Ukuhamba ngehora nje usuka e-LA, kunomthwalo omningi wezinto ezimnandi okufanele zenziwe e-Oxnard ukusuka ekuqashweni kokushushuluza kwe-ski kuye ekuhloleni uhambo oludlula eChannel Islands — okuyinto Ogwini lolwandle luka-Oxnard nikeza umbono wasezulwini ku.
Ucabanga ngokuqashisa indlu yolwandle ukuze kuphele isonto kwenye indawo? Uzothola olwandle oluningi ngasogwini luka-Oxnard, noma kunjalo, i-Oxnard Seashore uqobo kungaba ngumklomelo.
Amagagasi lapha akhazimula ngokuphelele, futhi kumane nje kuhlangana ne-canine elahlwe kahle i-Oxnard Seashore Park, ehlukile ngokuthwebula izithombe, ukundiza kite, ukuhlala onqenqemeni lwesihlabathi, nokubuka ngokulangazelela imibhoshongo yabanye.
Ukuma kumnandi futhi kunesizotha, ku- $ 5 usuku lonke (ukheshi). Ungaletha i-canine yakho inqobo nje uma ikuchungechunge, futhi njengoba u-Oxnard Seashore esePacific Coast Bike Course, yindawo enhle yokuletha ibhayisikili lakho.
Ukubhuka kuyadingeka kuma-punch picnic, ngakho-ke shayela (ku-805-385-7946) ukuze uhlwithe indawo.
13. ISanta Monica State Beach
Olunye lwamabhishi aziwa kakhulu endaweni yaseGreater Los Angeles Santa Monica. Amabhishi aso amade, anesihlabathi esimhlophe, i-pier, ayichaza kanye ne-Annenberg Community Beach House, futhi ihlala igcwele imisebenzi nabantu.
Ama-roller coasters, ama-Segways, ama-pancake, namahhotela okunethezeka konke kuyatholakala eSanta Monica Beach, nayo enesihlabathi esimhlophe esihle kunazo zonke emhlabeni.
Awubheki uma ungatholi lutho lokwenza lapho. Leli elinye lamabhishi aseduze kwami.
14. ISunset Beach - Isifunda sase-Orange
Lolu bhishi olungazenzisi luyintandokazi yendawo, ngenxa yokutholakala kwalo kalula, ukupaka emgwaqweni mahhala, nokubukwa okufanele ikhadi.
Uma kuqhathaniswa namabhishi aseduze, kuyindawo engaphandle kwendlela engaphambi kwendawo yangasese evulekile egcina amabutho evulekile, evumela usuku olwandle oluzolile ngokukhethekile.
ISunset Beach inikela ngezindlu zangasese kanye nabaqaphi, kepha akukho ukudla ngaphandle kwalokho okuletha kupholile kwakho. Yize iHuntington Beach iyidolobha eliseduze kakhulu, iSunset Beach iyidolobha layo elingahlanganisiwe orange County.
Phakathi kuka-Anderson Street noWarner Avenue, entshonalanga yePacific Avenue kunogu lolwandle.
15. Umthengisi wedokodo
Ukulandela isikhathi esingeziwe se- Umthengisi wedokodo imililo emikhulu ivalwa, eminye ekugcineni ibuyiselwe olwandle futhi iyatholakala ukuthi isetshenziswe. Leli elinye lamabhishi aseduze kwami.
Imililo emikhulu ayikho emthethweni eLos Angeles kanti ukutholakala kwayo eDockweiler kungenye yezinto ezilula ezahlukanisa lolwandle — vele uqinisekise ukuthi uyibeka endaweni yakho ngesikhathi ngesikhathi njengoba izokwenyuka ngokushesha.
Uma kwenzeka ufuna isivivinyo, thatha umdlalo wakho we-bar-b-que uhambe nawo — thola inyama ku-Belcampo lapho ukhuphuka, bese usetha ibhavu elicijile ngomlilo.
Utshwala abuvunyelwe kwa-Dockweiler, futhi uzobona abagibeli bamaphoyisa abambalwa bezulazula.
Asisoze saphoqelela ukwedelela izinkambiso, okusho ukuthi asisoze sakukhuthaza ukuthi uhlwithe izinkomishi zokudla ezingabizi ngaphambi kokuvela bese uziqothula ngeziphuzo ezihambisana nalokho okuthandayo, okwenza kube nzima kakhulu kunoma yikuphi ukuqaliswa komthetho okuqhubekayo ukubona.
Akunathuba lokuthi singakhuthaza lokho nganoma yisiphi isikhathi. Kuncane kakhulu okusondele ku-Dockweiler (ngaphandle kokuthi uzama ukudla eRemiss), ngakho-ke kuzoba uhlobo losuku lwe-BYO Cookout.
16. ILeo Carrillo State Park
ILeo Carrillo National Park yindawo ehlukahlukene ngokwezemvelo enamawa amakhulu, umfula iMalibu ongahamba kuwo, namanzi amsulwa anamachibi amaningi. Leli elinye lamabhishi aseduze kwami.
Kuyipharadesi labaselwandle, ababhukudi, izindawo zokuphumula zasebhishi, izivunguvungu zomoya, abathandi bezokudoba, nabahloli abanelukuluku lokwazi amaseli asogwini, ahlelwe amakhilomitha ayi-1.5 ebhishi elifanele.
Amatende olwandle avikelwe yizihlahla ezinkulu ze-sycamore angaba yingxenye enkulu kepha amanzi kaLeo Carrillo angahlala kunoma yisiphi isivakashi.
Izinto eziphezulu okufanele zenziwe eTennessee
Izinto okufanele uzenze ePigeon Forge
Kubukeka sengathi inhloso kaMalibu yokugibela ikhanda, EzikaZuma uhlobo lwabantu abavela emfanekisweni waseMidwest lapho bebheka ulwandle lwaseLos Angeles — badubula ithani leBaywatch lapha.
UZuma mhlawumbe ulwandle olukhulu kunawo wonke kulo lonke i-LA, ngakho-ke ngaphandle kokudume kwalo, kufanele, noma ngabe ikuphi, ube nethuba lokucwila ekutholeni okuhle; kungokufanayo lapho uzothola khona iPoint Dume, umucu omangalisayo onamathela olwandle.
Uma kwenzeka ungumqobi wamatshe, zenzele phezulu ukuze uthole umbono ohehayo wezingonyama zolwandle ngokujwayelekile. Kunezinto eziningi zokuma, kodwa-ke, ngenxa yokubhonga kukaZuma ngakho kungabiza imali ethe xaxa kunolwandle oluhlukile — amanani ehlobo angakhuphukela ku- $ 10 ngentambama (futhi akukho kuvunyelwa ukumisa ubusuku bonke).
Qiniseka ukuthi usebenzisa izinzuzo, kepha, njengezindlu zangasese ezimbi, izihlambi, nezinkantolo ze-volleyball.
Ngenkathi izitendi zokudla zitholakala kolunye noma ohlangothini olusogwini lolwandle, noma yiluphi usuku oluvelele lweMalibu kumele luqale (noma luphele) eMalibu Wines — yizinga lekhwalithi engcono kakhulu yokuphuza usuku eLos Angeles.
Izizathu ziyamangalisa ngokuphelele, futhi isisekelo sekhasimende ngisho nangaphezulu. Noma ngakolunye uhlangothi uma uthanda ukuthanda ukunambitha iwayini nokugcobisa kuma-nibble amasha emakethe nolwandle njengolwazi lwakho, hamba uye eMalibu Ranch Restaurant eMalibu Dock.
18. Ngabe iRogers State Beach
Leli paki elinokhiye ophansi elinesihlabathi esanele ukuba seluleke lisenyakatho nje yeSanta Monica Pier. Futhi, lena indawo enhle yokubhukuda, ipikinikini, noma ukudlala i-volleyball (amanetha lapha maningi).
Umzila webhayisikili waseMarvin Braude wamamayela angama-22 nawo uyaqala, ngakho-ke letha i-beach cruiser (noma uyiqashe eyodwa) ukuhlola ulwandle. Lokhu kungenye yamaTrack Beaches Near Me.
19. ITopazi Jetty
Ufuna ukusuka ezixukwini? I- isifunda eseningizimu neTopaz Jetty kungenye indawo ezolile yokugeza ilanga ebhishi lendabuko laseSouth California.
Izinsizakusebenza zincane, kepha uma ufuna ukuphithizela kakhudlwana, ukuhamba ibangana yi-creaking, tacky Redondo Beach Pier, lapho uDennis Wilson noMike Love baqale bavuma ukuqamba ingoma mayelana nokuntweza phezu kwamanzi.
Futhi, ibhishi liyatholakala ngezinyathelo ezimbili zomphakathi eTopaz nase-Esplanade.
20. Ibhishi Lezinja likaRosie
ICanine Seashore kaRosie, siyajabula ukusho, iyona nto ocabanga ukuthi iyiyona. Intambo ngokuphelele, uzoyibona esikhaleni saseBelmont Shore saseLong Seashore.
Imidlalo kaRosie ibamba izigaxa zemicimbi emnandi ye-canine futhi, ngakho-ke noma kunini lapho uthole khona ukwemukelwa ku-Facebook ngento efana ne- “Corgi Seashore Day,” amathuba okuthi bekuseRosie. Ngaphandle kokungabaza indawo eyinhloko lapho ungadla khona ngempela ku-canine emanzi.
Amahora ama-canine angama-6 ekuseni-8 ntambama, ngakho-ke, abangane bakho abaseduze kakhulu abavunyelwe olwandle ngaphandle kwalesi sikhathi.
Ngokwengeziwe, qaphela ukuthi ugu lolwandle alubiyelwe, futhi ukhumbula ukuthi amanye amasaka we-crap ayatholakala kusuka ezitsheni, kuyinhlakanipho ukuletha okwakho.
ILong Seashore, empeleni okuyisifunda se-LA, inenani elimangazayo lama-pummels amangalisayo ehhovisi lokudla nokuphuza.
Noma ikuphi ukuphazanyiswa kokudla kwaseMexico kufanele kukuholele kwaLola: kukhangiswe ngokumangazayo, kepha kufanelekile ngenxa yokuthi ukudla kuyamangalisa. Lokhu kungenye yamaTrack Beaches Near Me.
21. IHermosa Beach
Ubusuku ebusuku Kuhle cishe kunzima ukukhuphukela phezulu, futhi ungazithola emaphethelweni edokhu ende — thatha umuntu omthandayo, futhi ngokuqinisekile singenza izitatimende ezizosebenza kahle.
IHermosa Cyclery yindawo enhle ukuqala usuku lwakho uma usesimweni sengqondo ukuqasha amabhayisikili ambalwa bese udla umoya wasolwandle.
Uma kwenzeka uyi-aficionado ye-volleyball yasolwandle noma ithenisi, uHermosa unezinkantolo zakho.
Zama ukungalindeli ukuthi iDock of Seashore Dock icishe ifane neSanta Claus Monica Wharf — akukho okugibelwayo nokukhangayo lapha, kumane nje kube itheku elibandayo elidlala imibono ethile lapho ilanga lishona.
IHermosa ayinantuthu, okusho ukuthi ukubhema nokuhwamuka (ukukhokha ingqondo encane kulokho okubhemayo) akuvunyelwe kunoma iziphi izikhala zomphakathi.
IHermosa Seashore igcwele ukudla neziphuzo ezisezingeni lokuqala, ikakhulukazi iBaran's 2239 (zama iqanda laseNdiya), uBarsha (ubhangqa izimbaza zeLa Goulette newayini elimhlophe elivuselelayo), nePalmilla Cocina Y Tequila (bamba ikhukhamba i-jalapeño margarita futhi ubheke ngokulangazelela olwandle).
Ukuze uthole isisetshenziswa esikuso sonke sazo zonke izidingo zakho ezihlukile, shaya u-Abigaile: indawo iqala njengendawo yokuqala yokuphekela izitsha kanye ne-eatery, futhi iguquke ibe ngumfutho wokudansa ophahleni phezulu. Leli elinye lamabhishi aseduze kwami.
22. IHuntington City Beach
IHuntington City Beach ibhishi elivelele kunalo lonke leli banga, elibekwe ngaphakathi kwepaki engama-121-acre elakhiwa ngo-1942 futhi lihlanganisa indawo ephezulu ye-Orange County.
Iyaziwa kakhulu ngamakhefu ayo e-surf, i-International Surfing Museum, nosuku nokuhlwa okusebenzayo. Kunezitolo eziningi ze-surf lapho ungaqasha khona ibhodi noma uthenge ithawula, kanye nezindawo zokudlela eziningi, izinkantini, abapheki bendawo, kanye ne-pier enhle.
Noma ingekho olwandle, uzobe unganaki uma ungazami iSurf City Taco kaNormita, intandokazi yendawo.
23. IManhattan Beach
Hhayi ukudlula IHermosa, iManhattan Seashore ngokufanayo kuzoba nezithunzi ezithile zobuhlanya esigabeni sokuhlwa.
Kulula ukuqeda usuku ngokuzivocavoca umzimba lapha, ngeMarvin Braude Bicycle Trail, iPolliwog Park (indawo enhle yegalufa lepuleti), neSand Rise Park, okufana nokubukeka kwayo.
Abantu basebenzisa ithambeka elikhulu ukwenza umsebenzi, kepha-ke, uyazi ukuthi yisiphi isikhathi esingcono kunokusebenza (ngaphandle kwakho konke)? I-Sandboarding.
Njengoba ugu lolwandle olungamamayela amabili kanye nezindawo zokupaka ezingaba ngu-500 kuphela, amathuba aphezulu okuthi usuku olwamukelekayo.
Amabhishi asebhishi laseNingizimu Straight akuyona eyokuqhuma kwe-buzz embonini yezokuvakasha ozokuthola eSt Nick Monica naseVenice, nokho lokho kungaba yinto oyifunayo.
Ungadla / uphuze kuphi: IManhattan Seashore Post ingumpetha wesidlo sasekuseni ongakahleleki osindayo, onemiqulu eyanele yebhekoni cheddar kanye ne-chimichurri skirt steak ukunqoba noma yibuphi ubuhlungu bekhanda. Uma kwenzeka zigcwele, Ukudoba NgeDynamite kungenye into okumele yenziwe, ngenxa yokuthi kungaba yini ibha engahluziwe kunazo zonke edolobheni.
24. IPoint Dume State Beach
IPoint Dume itholakala engxenyeni eseningizimu kakhulu yeMalibu, eweni elingena ePacific lize lithambekele olwandle olumise okwenhlendla.
Amanzi acace ngokwedlulele, okwenza kube yindawo enhle ukubhukuda ngosuku olushisayo lwasehlobo, kanye nendawo enhle yokubhukuda lapho ungabhukuda khona namabhubesi olwandle.
Futhi, ibhishi liyaziwa futhi ngokuthi liyindawo enhle kakhulu yokufunda ukukhuphuka ngamatshe. Kukhona okuncane okwenzelwe wonke umuntu okulo.
25. I-El Matador State Beach
I-matador wuhlobo lolwandle i-Angeleno ezokuhambisa kulo ngokushesha lapho ufika esikhumulweni sezindiza.
Kuyindawo emangalisayo yezwe, egqitshwe phansi ngezitebhisi ezinamagagasi ezinamadwala amangalisayo abukeka sengathi aqhamuke ePacific, kanye namachibi olwandle anikeza umbono wabangane bethu basolwandle.
Uma uthatha isinqumo sokuwavakashela izithombe noma umane uhlole, sicela uqaphele ukugqoka izicathulo zamanzi ngoba amadwala angahle ashelele. I-El Matador ayinazinsizakalo noma izinsiza ngoba ingcebo yemvelo.
Uzolulungela usuku uma uletha amathawula akho asebhishi, isikrini selanga, nempahla yepikinikini.
Izinto okufanele uzenze e-Orland, FL
Izindawo Ezinhle Zokuvakashela Ngo-Okthoba
Izinto ezizokwenziwa eDC kule mpelasonto
Izindawo Ezinhle Kunazo Zonke Emhlabeni
Qaphela, sikhetha olwandle oluhle kakhulu naseLos Angeles namaphethelo, ngamathiphu wokuthi ungasizakala kanjani ngawo wonke umuntu.
Usuku lokukhumbula lukhombisa ukuqala okungahlelekile kwehlobo eSouthern California, okusho ukuthi isikhathi sogu lolwandle njengamanje sihamba phambili ngokugcwele.
Ngaphezu kwalokho, lapha e-LA, lapho kungenzima khona ukudinga izinsuku eziqhakazile ngokweqiniso, sinokukhetha okuningi lapho kufika isikhathi sokwenza isipiliyoni sakho se-sandy esilandelayo.
Ngakho-ke sebenzisa ogwini lwethu olukhululekile ngobuningi basogwini lolwandle okulungele ukubhebhana ngesikebhe, ukuntweza olwandle, ukubhukuda, noma ukushisa ilanga esihlabathini. Siqinisekisa ukuthi ekugcineni uzoshintsha ngokuya ngamazinga okushisa apholile oLwandlekazi iPacific, ikakhulukazi ezinyangeni zangaphambi kokuwa lapho imfudumalo eyomile iba engabekezeleleki.
Ngaphezulu kukhona izindawo ezisogwini oludinga ukungena ngaphakathi naseLos Angeles, nezindawo okufanele uzidle lapho ulapho. Ngiyethemba uyabathanda.
Sicela ushiye amazwana, njengale ndatshana kumabhishi aseduze kwami, bese utshela abangane bakho nomndeni wakho ngakho!
Tags:amabhishi e-los angeles avulekile, amabhishi aseduze kwami, amabhishi amahle kakhulu la, ulwandle lwelaguna, ibhishi ende, ulwandle lwe-venice
Imilayezo Yenduduzo eya Kubaphathi: Izindlela Ezingama-65 Zokuzwelana Nabaphathi Bakho
Ukhula Luhlala Isikhathi Eside Kangakanani Ohlelweni Lwakho? Yikuphi Ukutholwa Okutholakalayo?
Ngabe i-CVS iyathenga / ithengisa ama-oda wemali? Ungabathola Kanjani e-CVS Pharmacy
Izicathulo ezihamba phambili zeNike zokuhamba, ukugijima noma abahlengikazi abama usuku lonke
Amabhishi amahle kakhulu emhlabeni kanye neziqhingi ezimangalisayo zaseCaribbean zeholide
Ama-Deodorants Abesilisa Abakhulu Kakhulu nama-AntiPerspirants Ama-Amazing Okuhlala Akhona
Ama-Exfoliator ahamba phambili wobuso nazo zonke izinhlobo zesikhumba kanye nezinzuzo zabo ezimangalisayo
Ama-Thrillers ahamba phambili ku-Netflix nama-movie angama-25 asolisa kakhulu ongawabuka